Tun Tun's Photo Diary: Sunset & Dinner at Parit Jawa, Muar
နေရာက လူတော်တော် ရှင်းပြီး တိတ်ဆိတ် အေးချမ်းနေတာပဲ။ ဒီခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး သွားခဲ့တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လူတွေ သိပ်မတွေ.ရဘူး။ ပြောချင်တာက သွားလည်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လာလည်တဲ့ သူတွေ သိပ်မရှိဘူး။ ကိုယ်သွားတဲ့ နေရာကလဲ လူတွေ သိပ်ပြီး မသွားကြတဲ့ နေရာ ဖြစ်တာလဲ ပါမယ်။ စင်ကာပူမှာ နေတာကြာလာလို.လဲ ပါမယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ စင်ကာပူမှာ ဆိုရင် နိုင်ငံကသေးတော့ ဘယ်နေရာ သွားလိုက် သွားလိုက် လူတွေ အများကြီးပဲ။
Zoom မှန်ဘီလူးရဲ. ကျေးဇူးကြောင့် အဝေးမှာ ရှိတဲ့ အကောင်ပလောင် နဲ. အရာဝတ္ထုတွေ ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ နေက တဖြည်းဖြည်း ၀င်စ ပြုနေပြီ။
ရေပြင်ကျယ်ကြီး ပေါ်မှာ နေ၀င်ချိန်မို. အနီရောင်နေရောင်ခြည်တွေ ဖြာကျနေတဲ့ Background မှာ ငှက်မျိုးစုံ အစာရှာနေတာ ကို အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ မြို.ပြ မှာ ဆိုရင် ဒါမျိုးက မြင်ရခဲတယ်လေ။ ဗျိုင်းတွေ ငါးတွေကို အကောင်လိုက် မြိုချနေတာတွေ၊ နှတ်သီးနဲ. ကိုက်ချီပြီး ပျံသွားတာတွေ တွေ.ရတယ်။
နောက်ဆုံး နေ၀င်သွားတော့ Parit Jawa နားက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ညစာစားပြီးမှ ဟိုတယ်ကို ပြန်ပါတယ်။
ဟိုတယ် ရောက်တော့ ညကြီး ငါးမြှား ချင်သူတွေ ငါး ထွက်မြှားကြတယ်။ ဟိုတယ်က မြစ်ဘေးမှာ ရှိတာလေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပင်းပန်းလို. ရေပူနဲ. ရေချိုးပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ မနက်ဖြန် စင်ကာပူ မပြန်ခင် Muar မြို.ထဲကို လျှောက်လည်ဦးမှာပါ။
at 11/03/2014 06:28:00 AM